Gudoomiyaha Gobolka Meru oo si xoogan u beeniyay in uu sababteedu leeyahay joojinta qaadka | Baydhabo Online
Gudoomiyaha Gobolka Meru, Peter Munya, ayaa waxaa uu iska fogeeyay in uu isagu u sabab yahay tallaabadii, ay Dowladda Somaliya ku joojisay qaadka ka baxa dalka Kenya.
Peter Munya, ayaa yiri “In suuq loo raadiyo qaadka oo weliba suuq dibadda ah waa shaqo u taala Dowladda Dhexe Kenya, maaha shaqo u taala Dowladda Gobolkan Meru iyo Ismaamul Hoosaadka
Anigu waxaan raadiyay suuq dibadda ah oo qaadka loo iibgeeyo. Markii aan Somaliland tagey waxaan doonaayay in halkaasi suuq qaadka lagu iibiyo aan ka helno. Ujeedadeedu mar walba waxay ahayd in suuq dibadda ah loo helo qaadka aan ku beerno Gobolka Meru.”
“Halis ayay hadda nafteedu ku jirtaa, waa dacaayad la’iiga samaynayo. Waa mid aniga la’igu bahdilaayo.